Amiir Harry iyo gabadha uu calmaday Meghan oo ugu dambeyntii is aroosay… – Hagaag.com
Amiir Harry iyo gabadha uu calmaday Meghan oo ugu dambeyntii is aroosay…
Posted on 19 Maajo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waxaan si rasmi ah oo sidii loogu talogalay u dhacay arooskii la wada sugayay ee amiirka boqoryootada Ingiriiska Amiir Harry iyo gabadha uu calmaday ee Meghan Markle oo ah gabadh madoow iyo caddaan ay iska dhaleen oo u dhalatay dalka Maraykanka.
Arooska ayaa waxa uu ka dhacay kaniisad ku taala magaalada Windsor, halkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha labada qoys ee lammaanaha is guursanayay, oo ay ka ahayd boqorada Ingiriiska iyo Meghan hooyadeed Doria Ragland.
Illaa 600 qof oo la marti sharaf ah oo ay ka midyihiin dad caan ah ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa arooska.
Harry waxaa minxiis u ahaa walaalkiis ka weyn William, halka gabadha ay minxiis u ahaayeen gabdho yaryar oo lasoo xulay, kuwaas oo faraqyada u hayay cambuurka aroosada oo ah mid cad oo leh seen dheer oo dabo jiitamaysa.
Hab maamuuska xafladda arooska ayaa ahayd mid aad looga shaqeeyay , iyada oo sidoo kale la keenay kooxo muusiga.
Lammaanaha ayaa gaari-faras ku dhex maray magaalada Windsor si ay u salaamaan dadweyne 100 kun dhan oo daawanayay oo dhoobana dariiqyada magaalada.
Markii dambe waxa ay lammaanaha isu galiyeen faraantiga astaanta u ah , iyaga oo sidoo kale gacmaha inta is qabsaday , marana loogu duuduubay labada gacmood si wadajir ah, ayaa waxa uu mid kasta sameeyay balanqaad ah in ay daacad isu ahaanayaan noloshooda inta ka dhiman.
Boqorada Ingiriiska ayaa Amiirka iyo aroosada cusub ku maamuustay darajada ugu saraysa ee boqortooyada, iyada oo u magacoowday amiirka iyo amiiradda degmada Sussex ee Ingiriiska.